'RRR' သည် Netflix ရုံတင်သည့် ခေတ်မီ၊ မရပ်မနား Action Epic ဖြစ်သည်။
ပင်မစာမျက်နှာ	ဖျော်ဖြေရေးသတင်း	'RRR' သည် Netflix ရုံတင်သည့် ခေတ်မီ၊ မရပ်မနား Action Epic ဖြစ်သည်။
ဟောလီးဝုဒ်မှာ အခန်းမရှိတော့တဲ့အခါ 'RRR' ဟာ ကမ္ဘာမြေကို လျှောက်လှမ်းနေလိမ့်မယ်။
by တိမောသေရောလ် ဇြန္လ 1, 2022
by တိမောသေရောလ် ဇြန္လ 1, 2022 848 အမြင်များ
သရဲဇာတ်ကားမဟုတ်ပေမယ့်၊ RRRယခု Netflix (US) တွင် ထုတ်လွှင့်နေခြင်းသည် အလွန်ကြီးကျယ်ပြီး အံ့မခန်းဖြစ်နေသောကြောင့် ပြန့်ကျဲနေသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား လက်လွှတ်မခံနိုင်ပေ — ၎င်းမှာ ရှိနေကြောင်း သင့်အား အသိပေးအပ်ပါသည်။
စာတန်းထိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင် တစ်ချို့က စိုးရွံ့နေကြတယ်ဆိုတာ ငါတို့သိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်ထိ ရင်သပ်ရှုမောစရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလဲဆိုတာကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ RRR ၎င်း၏ပုံပြင်ကိုပြောပြရန်အသုံးပြုသည်၊ သင်၏မျက်လုံးများသည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေနားထောင်ခြင်းအများစုကိုလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ အဝေးကို မကြည့်ဘူး —- ဒီဇာတ်ကားက 180 မိနစ်ဘုန်းကြီး မရပ်မနား အမြင်အာရုံဆိုင်ရာ အထူးပြုလုပ်ချက်များ၊ စတန့်များ၊ ဂီတနှင့် ဟုတ်သော ထိတ်လန့်စရာကောင်းသော ပရိသတ်များ၊ သွေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများ။ Steven Spielberg ပင်လျှင် ဤရုပ်ရှင်ကို ပိုကောင်းအောင် မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါ။
ဤဆောင်းပါးသည် ရုပ်ရှင်သုံးသပ်ချက်မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် သင့်အား စမ်းစစ်ပြီး ရောင်းချမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် ငါဒီလိုပြောမယ်- ပထမ 10 မိနစ်ကိုကြည့်ရုံနဲ့ မင်းလုံးဝမရင်းနှီးဘူးဆိုရင် ငါ့ကို မှတ်ချက်တစ်ခုပေးပြီး @me ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဝါးစားလိုက်ပါ။ F စကားလုံးတွေ သုံးလို့ရတယ်၊ ဒါ လုံးဝကောင်းပါတယ်။
RRR ဆိုတာ ဘာလဲ။
ပထမအချက်မှာ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများ ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သည့် ငြင်းဆိုချက်ဖြစ်သည်။ သို့ပေမယ့် RRR သမိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းတွေ ရှိတယ်၊ အဲဒါက အမှန်တရားကို အခြေခံတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အသက်ရှင်သော သို့မဟုတ် သေသောသူများနှင့် ဆင်တူသည်ဆိုသည်က တိုက်ဆိုင်မှုသက်သက်သာဖြစ်သည်။ ကျားတစ်ကောင်တည်း လိုက်ဖမ်းတယ်ဆိုတာ သက်သေပါပဲ။ ထို့ အပြင်၊ ထို ကျားရိုက်ကွင်း ဖြစ်စေတယ်။ Gladiator ရဲ့ Super Bowl Sunday တွင် Kitten Bowl နှင့်တူသည်။
ရုပ်ရှင်၏ ခေါင်းစဉ်ကတ်သည် မိနစ် ၄၀ ကြာသည်အထိ စခရင်ပေါ်တွင် ပေါ်မလာပါ။
ဒါရိုက်တာ Rajamouli သည် လက်တွေ့ဘဝ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင် Komaram Bheem နှင့် Alluri Sitarama Raju (Ram) တို့၏ ဇာတ်လမ်းများကို စိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ သူက ဇာတ်ညွှန်းရေးတဲ့အခါ အနုပညာလွတ်လပ်ခွင့်ကို ရယူပြီး Bheem နဲ့ Alluri အမှန်တကယ် သူငယ်ချင်းဖြစ်လာတဲ့ စကြာဝဠာတစ်ခုကို စိတ်ကူးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။
ဤဇာတ်ကောင်များကို သရုပ်ဆောင်ခြင်းမှာ အိန္ဒိယ၏ အကြီးကျယ်ဆုံးကြယ်ပွင့်များဖြစ်သည့် NT Rama Rao Jr. (Jr. NTR) နှင့် Ram Charan တို့ဖြစ်သည်။
RRR ၎င်းတို့နှစ်ဦးနှင့် အိန္ဒိယရှိ ဗြိတိသျှ Raj ကို ပုန်ကန်သည့် ဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။ Rajamouli သည် ၎င်းတို့အား လူသာမန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စွမ်းအားများ ပေးစွမ်းသည်- ၎င်းသည် ထိပ်တန်းမှ မရပ်မနား စိတ်ကူးယဉ် စိတ်ကူးယဉ် ဒေါ်လာ ၇၂ သန်းတန် ဒေါ်လာဖြစ်သည်။
ထင်ရှားသည်မှာ၊ ဗြိတိသျှသရဖူသည် 1920 တွင်ဖော်ပြထားသော ဤဇာတ်လမ်းတွင် အဆင်မပြေပါ။ ၎င်းတို့သည် အိန္ဒိယပြည်သူများကို သာလွန်လူသားများအဖြစ် အစဉ်တစိုက် ဆက်ဆံနေသော လူဆိုး၊ လူမျိုးရေးခွဲခြားဖိနှိပ်သူများနှင့် ဆင်တူစေရန် ဖန်တီးထားသည်။ အချိန်တွေ တိကျနိုင်ပါ့မလား။ သို့သော်၊ ဤအချက်ကို အစပျိုးသတိပေးချက်ဟု မှတ်ယူပါ။
အက်ရှင်! အက်ရှင်! အက်ရှင်!
အလိုလိုသိသာထင်ရှားသော flashmobs၊ ကျယ်လောင်သောအစုံများ၊ အနှေးလှုပ်ရှားမှုများ—- CGI သည် အနုပညာ tapestry ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည့်—- RRR ရုပ်ရှင်ဖျော်ဖြေရေးလောကအတွက် ခမ်းနားသော အမူအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပျားရည်ပူဆာလိုပဲ၊ ဒီဇာတ်ကားက af*** မဟုတ်ဘူး။
ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးသူများသည် ရုပ်ရှင်တစ်ခုလုံးအတွက် ၎င်းတို့၏ အထူးဖန်တီးမှု ဘတ်ဂျက်ငွေကို ကျော်လွန်သွားသည်ဟု သင်ထင်သောအခါတွင်၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းကို ပို၍ပင် ထိပ်တန်းအစီအစဥ်ဖြင့် လိုက်နာကြသည်။ ရေဆေးပြီး ထပ်လုပ်ပါ။
ပြဿနာအနည်းငယ်ရှိပေမယ့် ဘယ်သူက ဂရုစိုက်မှာလဲ။
မပြည့်စုံပေမယ့်၊ အချို့သော သရုပ်ဆောင်များသည် အော်ပရာဆန်ပြီး ဒရာမာကို ဆပ်ပြာဖြင့် သမိုင်းဝင်၊ RRR ပျော့ပျောင်းသော အစက်အပြောက်များကို ဖြတ်ကျော်ရန် ၎င်း၏အင်ဂျင်တွင် လုံလောက်သော ရေနွေးငွေ့ပါရှိသည်။ အားလုံးပြီးသွားသောအခါတွင် သင်သည် နောက်ထပ် မိနစ် 180 မျှ ပျော်ရွှင်ရန် ဆန္ဒရှိပေမည်။
ဟုတ်တယ်၊ ၃ နာရီကြာတယ်။ ဘုန်းကြီးတယ်။
အဲဒါက သုံးသပ်ချက်တစ်ခု ဖြစ်သွားမယ်ထင်တယ်။ အဲဒါကို နည်းနည်းတော့ ရောင်းစားခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့် အလယ်မှာ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ တောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့ လှည်းယာဉ်ကို အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်က စစ်သားတွေကို ရိုက်နှက်ဆုံးမပြီး ရိုက်နှက်ဆုံးမပြီး အမှိုက်တွေ ဖြုန်းတီးနေတဲ့ ဗြိတိသျှစစ်တပ်အပေါ်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း လွှတ်တင်လိုက်ပါတယ်။ သေခြင်းတရားဟာ ငါးမိနစ်ပြည့်အောင် လှိမ့်နေသလားလို့ မကြည့်ချင်ဘူးလား။
ဒီဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုတည်းက နောက်ဆုံးဇာတ်ဆောင်အတွက် လုံလောက်ပါတယ်။ Marvel ရုပ်ရှင်ဒါပေမယ့် ဒါက Act I ရဲ့ သေးငယ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါပဲ။
RRR ပြီးပြည့်စုံတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်ပေမယ့် အစကနေအဆုံးထိ ဘယ်တော့မှ လက်မလွှတ်ဘူး။ ရောင်စုံ၊ ပြတ်သားပြီး မဆုတ်မနစ်သော Rajamouli သည် အက်ရှင်ဇာတ်ကားတိုင်းအတွက် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမည့် အရိပ်အငွေ့ကို ဖယ်ချလိုက်ပါသည်။ ဟောလိဝုဒ်မှာ ပြန်လည်ရိုက်ကူးဖို့ ဘယ်တော့မှ ကြိုးစားမှာ မဟုတ်ဘူး - သူတို့မှာ ဘောလုံးတွေ ရှိမယ် မထင်ပါဘူး။
မဟုတ်ဘူး၊ ဒါက ထိတ်လန့်စရာရုပ်ရှင်မဟုတ်ပေမယ့် မယုံနိုင်စရာ၊ မြင်သာထင်သာမြင်သာရှိတဲ့၊ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကို ပရိသတ်တွေအနေနဲ့၊ RRR ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံရသည်။ iHorror ပါ.